Wasaaradda Amniga Puntland oo faah faahin ka bixisay hawlgalada La dagaalanka Burcadbadeedda [Warsaxaafadeed]
June 8, 2012 - Written by Ciidamada booliska badda Puntland “PMPF” oo howlgalo ka wadey dhul xebeedka ku teedsan gobolada Bari Iyo Karkaar 6 May-8 June 2012 ayaa guulo muhiim ah gaarey, halkaasoo ay ku soo qabqabteen burcad badeed iyo Qalabkoodii. Degmooyinka Baargaal ,Xaafuun iyo deegaan kaluuumeysiga Hul-Caanood ayaa hawlgaladii laga sameeyey waxaa u suuragashey ciidamada badda Puntland “PMPF” inay ka eryaan labo markab oo afduub loogu haystey meel ku dhow degaanka Raasi Binah kadib markii saheydii uga imaaneysa dhinaca barriga burcad badeedka ciidamadu ka jareen.
Labadaan Markab oo u baxsadey dhinaca badweynta ayaa waxaa saran burcad badeed uu hogaaminayo Ciise Yulux oo ah afduubihii qoyska u dhashey wadanka Denmark islamarkaana degaanka Hulcaanood horey dagaal gaadmo ah ugu diley shan askari oo ka tirsanaa ciidanka Booliska Puntland. Degaanka Hulcaanood oo hadda ay ku sugan yihiin ciidamada Badda Puntland ayaa hogaamiye burcad badeedkaanu oo magaciisa la yiraahdo Ciise Yulux ku dhuumaaleysan jirey in muddo ah.
Dhinaca kale Dowlada Puntland iyo hogaanka ciidamada Booliska Badda ayaa mahad balaaran u jeedinaya shacabka ku nool degaanadaas kuwaasoo gacan wayn ka gaystey la dagaalanka Burcad badeedka ku dhuumaaleysaneysay dhulkaas. Howlgaladaan ay qaadeen ciidamada Booliska Badda Puntland “PMF”ayaa ka dambeeyey go’aamadii golaha amaanka ee Qaramada Midoobey kuwaasoo tilmaamayey in burcad badeedka Somalida lagala dagaalamo Badda Barriga iyo in maamulada ka jira Somalia xoojiyaan hay’dahooda aminga.
Dowlada Puntland ayaa ugu baaqeysa beesha caalamka iney qayb buuxda ka qaadato xalinta dhibaatooyinka kalifa in bulshada degaanadaas ku biiraan falalka burcad badeed-nimada taasoo lagu baajin karo in laga dhabeeyo balanqaadyada loogu abuurayo fursado shaqo iyo kuwa kuwa horumarineed dadka ku nool halkaas.
Halkaan ka Akhri Puntland Maritime Police Forces Deploy in Strategic Coastal
Wasaarada Aminaga Puntland